>Beruma’s Game – How to shoot down Than Shwe – published | MoeMaKa Burmese News & Media
>Beruma’s Game – How to shoot down Than Shwe – published
October 1, 2008>
Beruma’s Game – How to shoot down Than Shwe – published September 30th 2008
တူမောင်ညို - ကာချုပ် ပြောစကားနဲ့ သဘောထားအပေါ် လေ့လာဆန်းစစ်မိသမျှ	ကာတွန်းလိုင်လုဏ် - ၂၅ လုံးသာ လိုတယ်	အဆိုတော် တကိုယ်တော် ကော်နီ Connie 30 Dreams စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲ	သိန်းမြတ် - သူရဲကောင်းတောင်ကြား	မောင်ရင်ငတေ - နှစ်ဆယ်ကျော်အလွမ်း - ဘီကေကေအစုန်အဆန် (လေယာဉ်စီး၍ ခရီးနှင်မယ်)	အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) - အကာအကွယ်မဲ့ရရှာတဲ့ မြတ်ဆရာတွေ	ကာတွန်းအောင်မော် - ဇိမ်ခံလေသူ	အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) - လိမ်ပွဲလား ညစ်ပွဲလား	ဖိုးသံ (လူထု) - ကျွန်တော်နဲ့ စန္ဒကိန္နရီ	ထင်အောင် - ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ဘူးသော အေဝမ်းကသီချင်းများ	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများParami Taxi Drivers - စစ်ရေးအသုံးစရိတ်အတွက် ၃၀% ပေးနေရတဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်မှ ပါရမီတက္ကစီ အငှားကားသမားများရဲ့ ဒုက္ခ
ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ တရားပွဲစဉ်များနှင့် ခရီးစဉ် ထွက်ရှိ Hinthada Town Officials abuse on Cell Phone Sales
စာပဒေသာ ကောက်စာများကွယ်လွန်သူ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော သို့ (Maung Swan Yi)
ထာ ၀ ရ ဂျူနီယာဝင်း - နုိုင်ငံရေး နေ့စဉ်မှတ်တမ်း သုို့မဟုတ် သတင်းကာတွန်း
Cartoon Box (1,408)
Twitter: moemakaဖိုးသံ (လူထု) – ကျွန်တော်နဲ့ စန္ဒကိန္နရီ http://t.co/qFxMPDrT3M about 53 minutes ago ReplyRetweetFavoriteသိန်းမြတ် – သူရဲကောင်းတောင်ကြား http://t.co/LxkJcGLWc0 about 55 minutes ago ReplyRetweetFavoriteမောင်ရင်ငတေ – နှစ်ဆယ်ကျော်အလွမ်း – ဘီကေကေအစုန်အဆန် (လေယာဉ်စီး၍ ခရီးနှင်မယ်) http://t.co/YaIQdHTLtY about 59 minutes ago ReplyRetweetFavoriteအရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – အကာအကွယ်မဲ့ရရှာတဲ့ မြတ်ဆရာတွေ http://t.co/o4O2NEADem about 1 hour ago ReplyRetweetFavoriteကာတွန်းလိုင်လုဏ် – ၂၅ လုံးသာ လိုတယ် http://t.co/FQgTLWewqB about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite@moemaka Copyright © 2015 MoeMaKa Burmese News & Media. All Rights Reserved.
By admin မိုးမခမဂ္ဂဇင်း အောက်တိုဘာလထုတ် ထွက်ပြီ၊ (အတွဲ၁၊ အမှတ် ၇၊ ၂၀၁၄) မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ၊ ၄၊ ၂၀၁၄...Read more » Recent Commentszaw aung on ကိုသန်းလွင် – ခြစားခြင်းရန်လင်းအောင် – အောက်ခြေမှတ်စု - Myanmar Information Zone on ရန်လင်းအောင် – အောက်ခြေမှတ်စုCatwoman on မောင်သာမည – နေရာပျောက်နေတဲ့ စာအုပ်များနဲ့ ဂုဏ်ရည်မဲ့ စာကြည့်တိုက်များDr.Maung Maung Gyi on စံလှကြီး – သတိထားသင့်သော နာမဝိသေသနလေးများaungmyomyat on Western Union Adversitment on MoeMaKaသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ